5 Toerana Picnic tsara indrindra any Eoropa | Save A Train
Home > Travel Europe > 5 Toerana Picnic tsara indrindra any Eoropa
Na mitsangantsangana mandritra ny faran'ny herinandro na fialantsasatra lavitra any Eropa ianao, tokony hanam-potoana ianao mba hiala sasatra. Ny sary iray dia fomba iray mahafinaritra hahafahanao miala sasatra sy ankafizin'ny tranonkala sy fomba fijery mahafinaritra. Noho izany, mba hanampiana anao hanomboka amin'ny fialantsasatra Eropeana, izahay dia maka tanana ary manangona harona feno sary amin'ny toerana tsara indrindra any Eoropa. Mipetraha fotsiny, ary mankafy ny fijery!
1. Picnic ao amin'ny havoan'i Petrin, Prague
Ny fomba fijery sy ny habakabaka ao amin'ny zaridainan'i Petrin Hill dia manome ho an'ny iray amin'ireo 5 toerana piknik tsara indrindra any Eoropa. Mampihomehy, ao amin'ny tanàna kely kokoa, Petrin Hill dia zaridaina maitso sy mahavariana izay tsy mijery ny Prague Castle. Manolotra ny fomba fijery mahafinaritra indrindra eto an-drenivohitra i Petrin, ary afaka miakatra any amin'ny tilikambo fitandremana ianao fomba fijery mahafinaritra tao an-tanàna, trano fiarovana, sy ny tetezana.
Petrin Hill dia tonga lafatra amin'ny fanaovana piknik any Eropa amin'ny lohataona, latsaka na fahavaratra. Ny ravina dia hijery feno manaitra ny fahalavoana ary amin'ny lohataona sy ny fahavaratra dia hamelana ny hazo sy ny tany rehetra ary hamirapiratra maitso. Ento fotsiny ny tenanao sasany amin'ny voankazo avy Artic Bakehouse ary ianareo rehetra dia natao hanaovana fitsangatsanganana mahafinaritra iray any Prague.
Ahoana no ahatongavana any an-tendrombohitra Petrin?
I Petrin Hill dia eny ampitan'ny Old Town sy ny foiben'ny tanàna ihany. Afaka mandeha amin'ny alàlan'ny funicular ianao, tram na bus, toy ny mpizahatany rehetra. fa, afaka mandeha mankany Petrin Hill ianao, mamakivaky ny tetezana Charles mankany amin'ny rindrina Mala Strana sy Lennon. Ho afaka eo amin'ny iray ora ianao raha tsara ny toetr'andro ary ny fitsangatsanganana mandra-pilentehan'ny masoandro dia hifarana tsara amin'ity andro manonofinofy ao an-tanàna ity.
2. Sary avy amin'ny renirano any Saxon Suisse, Alemaina
Renirano lehibe, rakotra ranomandry no alehany, ary ahitra maitso manodidina anao, Saxon Suisse zaridaim-pirenena dia paradisa mahavariana. Amin'ny maraina kamo na amin'ny faran'ny fitsangantsanganana lava, ny tetezana Bastei no toerana mety indrindra amin'ny fitsangantsanganana mahafinaritra.
Raha mankarary ny mpitsangantsangana ianao, tena mankasitraka anao ny maka aina amin'ny fitsangatsanganana iray. Etsy ankilany, raha tianao ny miaina tsara sy miala sasatra, sary iray eo amoron'ny renirano ao Saxon Switzerland no hanatrika ny fialantsasatra Eropeana rehetra.
Ahoana no hahazoana an'i Saxon Suisse?
Saxon Switzerland irery ihany no 30 Nandeha lamasinina tao Dresden. Noho izany, manaova kitapo Eierschecke, kafe, voaroy, ary voankazo avy eny an-tsena eo an-toerana ary milamina fotoana daholo ianao rehetra ao anatin'ny iray amin'ireo toerana misy sary mahafinaritra indrindra any Eropa.
Dusseldorf mankany Munich amin'ny Train
Dresden mankany Munich amin'ny lamasinina
Nuremberg mankany Munich amin'ny lamasinina
Bonn to Munich amin'ny lamasinina
3. Picnic By The Lake In Lago Di Braies, Italia
Rindrona manga sy tampon-tendrombohitra manga mitaratra ny farihy, ny fomba fijery ny Lake di Braies any South Tyrol any Italia dia handoko ny sary aminao miaraka amin'ny fahatsiarovana mahafinaritra. Ny any Italia dia culinary lanitra, atambatra farihy mahavariana ary ny tendrombohitra, tena tsy ilaina ny mamelabelatra momba ireo antony maro hita ao an-dranomasina izay 5 toerana piknik tsara indrindra any Eoropa.
Raha liana amin'ny fitsangatsanganana ao amin'ny Dolomites ianao, ny fizaran-tany lago di Braie andro-hike dia mora. Noho izany, tapitra ny andro mahafinaritra amin'ny natiora, maka ody iray avy amin'ny Paninio na ny sakao sy ankasitrahana ny fomba fijery ny farihy voajanahary lehibe indrindra ao amin'ny Dolomites.
Ahoana no ahatongavako amin'ny Lago Di Braie?
Lago di Braies dia fitsangatsanganana fiaran-dalamby lavitra an'i Bolzano, ny tanàna akaiky indrindra. Mila adiny iray eo ho eo ny lamasinina, na mahita trano tsara tarehy eny akaiky eny ianao.
Milan ho any Venice amin'ny fiaran-dalamby
Padua to Venice amin'ny fiaran-dalamby
Bologna mankany Venice amin'ny fiaran-dalamby
4. Picnic Ao amin'ny nosy iray any amin'ny Nosy Margret, Budapest
Ao amin'ny renirano Danube, eo anelanelan'i Buda sy Pest, Margaret Island dia tonga lafatra amin'ny fitsangatsanganana amin'ny lohataona any Budapest. Ny nosy dia 2.5 km, tiana indrindra eo an-toerana noho ny fahafinaretana an-tserasera eny an-toerana. Ankoatry ny, misy tsena eo an-toerana eo akaiky eo, ka tsy misy tokony hitondrana fotoam-pitsaboana avy any an-tanàna amin'ny fitateram-bahoaka. Nahazo ny ankafizinao fotsiny sy ny sakafo manina vitsivitsy eo an-tsena ianao ary nankany amin'ny nosy.
Misy zaridaina Japoney koa amin'ny nosy Margaret izay mendrika hotsidihina mialoha na aorian'ny filanao mahafinaritra.
Ahoana no ahatongavako any amin'ny Nosy Margaret?
Amin'ny kamiao na fiara fitateram-bahoaka, Ny nosy Margaret dia tena be mpampiasa amin'ny fitateram-bahoaka. Torohevitra avy ao anaty: Budapest Card dia mahazo anao extraes manokana ho an'ny fitateram-bahoaka sy attractions.
Paris dia zaridaina tsara tarehy sy toeram-pikaterana manerana ny Seine. Ny toerana fanaovana piknik tsara indrindra any Paris dia marina manerana ny haben'ny lalao Champs de Mars.
Efitra maitso mahafinaritra eo anelanelan'ny arrondissement fahafito sy ny Tilikambon'i Eiffel. Izy io dia tonga lafatra amin'ny fitsangantsanganana iray any Paris ary manolotra seho tsara indrindra amin'ny filentehan'ny masoandro. Ho fanampin'ny tontolo, Iray ihany koa ny 10 fomba fijery tsara indrindra ao amin'ny Tilikambo Eiffel any Paris.
Isaky ny vanin-taona mafana ny fianakaviana Paris dia tonga ny masoandro milentika na mankafy ny fahalavan'ny zaridaina. Tena milamina io ary manome toe-javatra mahafinaritra ahafahana mijery ny jiro alina Eiffel Tower.
Noho izany, ho azo antoka fa manangona kitapo vaovao, camembert, voankazo vaovao, divay, ary mitodiha any amin'ny iray amin'ireo toerana tsara indrindra any Eoropa.
Ahoana no hahazoana azy amin'ny fampakaram-bady De Mars Gardens?
Afaka mandeha amin'ny lamasinina metro na RER ianao. Mialà fotsiny eny amin'ny tobin'ny Champ de Mars-Tour Eiffel.
Ny fitsangatsanganana dia mety ho tafahoatra ary reraka satria maniry foana ny hahita sy hiaina amin'ny zava-drehetra. Misy hetsika sy fomba fijery miavaka sy tsy hay hadinoina be loatra any Eropa. Raha tokony miezaka foana ianao hahita araka izay tratra, indraindray mila maka mora fotsiny ianao. Ny fananana fitsangatsanganana miaraka amin'ny valan-tsakafo an-toerana dia fomba mahafinaritra hitrandrahana ny firenena sy ny sakafo, nefa tsy manao dingana.
Amsterdam mankany Paris amin'ny fiaran-dalamby
London mankany Paris amin'ny fiaran-dalamby
Rotterdam mankany Paris amin'ny lamasinina
Brussels mankany Paris amin'ny lamasinina
eto amin'ny Save A Train, dia ho faly izahay hanampy anao hahita ny tapakila fiarandalamby mora indrindra amin'ny toerana mahafinaritra picnic amin'ny lisitra misy anay.
Te-hampiditra am-peo bilaogy "5 Toerana Picnic In Europe" tsara indrindra amin'ny tranokalanao ve ianao?? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: ny https://embed.ly/code?url =ny https://www.saveatrain.com/blog/best-picnic-spots-europe/ ‎– (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
Raha te-ho tsara fanahy ny mpampiasa, dia afaka hitarika azy ireo mivantana an-pikarohana pejy. Eo ity rohy ity, ho hitanao ny zotram-piaranay malaza indrindra - https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside manana ny rohy ho an'ny teny Anglisy fipetrahana pejy, fa isika ihany koa dia manana https://www.saveatrain.com/zh-CN_routes_sitemap.xml, ary afaka hanova ny / zh-CN ny / en na / de kokoa fiteny.